650 Maxbuus oo la Sheegay in Laga Siidaayay Xabsiyada Jigjiga – Rasaasa News
May 15, 2010 650 Maxbuus oo la Sheegay in Laga Siidaayay Xabsiyada Jigjiga
Dadkan ayaa u xidhnaa siyaabo kala duwan waxayna isugu jireen shacab, jabhad iyo dad ka tirsanaa shaqaalaha maamulka gabalka, siideyntoodu waxay la xadhiidhaa heshiiskii dhawaan dhex maray Somali Galbeed iyo Itobiya.
Wararka aan helay ayaa waxay sheegayaan in maanta magaalada Jigjiga ay ka jirtay hawo farxadeed iyada oo boqolaalka ruux ee la siidaayay si weyn looga soo dhaweeyey gabalka oo dhan.
Saraakiil jabhada Somali Galbeed ka tirsan ayaa sheegay in dadka la siidaayay maanta ay dhibic uun ka yihiin tirada dadka ay doonayaan in xabsiyada laga sii daayo ka hor inta aan qalinka lagu duugin heshiis wali wadahadkiisa loo madalsan yahay.
Ilaa iyo maanta waxaa xaga wanaaga u socda wadahadalada u dhaxeeya JXSG iyo Xukuumada Itobiya. Waxayna dadweynaha gabalka u dhashay muujinayaan rajo aad u weyn oo keeni doonta saxan saxo wanaag iyo horumar u yimaada dadweynaha Somalida Ogadeeniya.